တစ်သက်လုံး အကျိုးပြန်ပေးသွားမယ့် ခက်ခဲတဲ့ အလုပ် ၉ ခု – Gentleman Magazine
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မနှစ်သက်တဲ့ အရာခြင်း မတူကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ရဲ့ သက်သက်သာသာ နေနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေထက် ကျော်လွန်ပြီး အလုပ်လုပ်တာဟာ ခက်ခဲပင်ပန်းပါတယ်ဆိုတာတော့ လူတိုင်း သဘောတူကြပါတယ်။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ တစ်ပါတ်ကိုတစ်ခေါက် ခက်ခဲတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ရှာပြီး လုပ်တာပါ။ ကြာလာရင် သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲကို နေသားကျသွားရင် ခက်ခဲတဲ့အရာတွေဟာ ပုံမှန် ကိစ္စတွေလို အသွင်ပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
လူတွေကို အကျိုးပြုတဲ့ ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့အရာ တချို့ကတော့
၁. အရာတိုင်းကို မေးခွန်းထုတ်ပါ
အဖြေရှိရှိ မရှိရှိ အရာတိုင်းကို မေးခွန်းပြန်ထုတ်ပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ဆန်းစစ်ကြည့်ပါ။ အဲဒါဟာ ခက်ခဲပင်ပန်းပေမယ့် မတူတဲ့ အခြားဘက်က မြင်နိုင်တဲ့ အကျိုးကို ရစေပါတယ်။
သင့်ဘဝထဲက သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်း၊ ပါတနာ၊ တစ်စုံတစ်ယောက်အပေါ် လုံးဝ ရိုးသားဖို့ဟာ အရမ်းခက်ခဲပင်ပန်းပါတယ်။ သင် ကောင်းတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပါတနာတစ်ယောက်ကို ဝေဖန်ချင်တဲ့ ခံစားချက်အားလုံးကို ရိုးရိုးသားသား စာတစ်စောင် ချရေးပြီး သူ့ကို ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီစာက သင်နဲ့ သူ့ကြားဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာလဲ သတ်သတ် စာတစ်စောင် ချရေးပါ။ အဲဒိအတွေ့အကြုံကို တစ်ဘဝလုံး မမေ့ပါနဲ့။
နေမထွက်ခင် ထတာဟာ စာကျက်ဖို့နဲ့ အလုပ်အတွက် အကောင်းဆုံး ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ မနက် ငါးနာရီ တခြားသူအားလုံး အိပ်နေတုန်း ထဖို့ဟာ ခက်ခဲပင်ပန်းလှပါတယ်။
၄. ငွေကို သတိထားသုံးပါ
သင့် ကားပြင်စရိတ်နဲ့ အာမခံက စလို့ ကော်ဖီဖိုး၊ အာလူးကြော်ဖိုးအထိ သင် သုံးလို့ ကုန်ကျသမျှအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပါ။ လပေါင်းများစွာ ကြာလာရင် သင် ငွေကို ဂရုစိုက် မှတ်သားသုံးတာကြောင့် ထွက်လာတဲ့ အပိုငွေ ပမာဏကို အံဩစရာကောင်းလောက်အောင် တွေ့ရမှာပါ။
၅. ဘာစားလဲဆိုတာ စာရင်းမှတ်ထားပါ
တစ်နေ့တာအတွင်း သင် စားသမျှ အစားအသောက်တွေနဲ့ လုပ်သမျှ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို စာရင်းမှတ်ထားရတာ ခက်ခဲမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အကျိုးအနေနဲ့ သင် ဘယ်အာဟာရကို နည်းနည်းပဲ ရသလဲ?? တစ်နေ့ကို အဆီ၊ သကြား ဘယ်လောက် စားသုံးနေလဲဆိုတာ သိရှိလာပြီး ချိန်ညှိနိုင်မှာပါ။
၆. အာဟာရဖြစ်မယ့် အစားအစာပဲ စားပါ
အာဟာရရှိမယ့်ဟာပဲ စားခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ဘဝကို လုံးဝ ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးသုံးမထားတဲ့ အော်ဂဲနစ် အစားအစာတွေကို စားပါ။ ဈေးပိုကြီးနိုင်ပေမယ့် ဆေးဖိုးဝါးခထက်တော့ သက်သာပါသေးတယ်။ အဆီမပါတဲ့ အသားတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အဓိကစားပြီး ဆန်၊ ဂျုံ လျှော့စားပါ။ အရမ်းခက်ခဲပင်ပန်းမှာ ဖြစ်ပေမယ့် အကျိုး ၁၀၀ ရာနှုန်း ရှိပါတယ်။
၇. လူတွေကြားထဲ စကားပြောတတ်အောင် ကျင့်ပါ
တွေးရတာတောင် လန့်စရာကောင်းနေပေမယ့် ဘဝတစ်ကွေ့မှာတော့ သင် လူတွေရှေ့မှာ စကားပြောရဖို့ သေချာပါတယ်။ လေ့ကျင့်တာဟာ သင့်ရဲ့ လူမှုဆက်သွယ်ရေး စွမ်းရည် တိုးတက်ဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။
၈. မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခု အောင်မြင်အောင် လုပ်ပါ
သင် လုပ်နိုင်သမျှ အခက်ခဲအပင်ပန်းဆုံး ဖြစ်မယ့်ဟာကတော့ သင် လုပ်ခဲ့သမျှ ပန်းတိုင်အားလုံးထက် ပိုပြီး ခက်ခဲတဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ရောက်ဖို့ပါပဲ။ သင် တစ်နေ့တာ အဆင်ပြေပြေ လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အခြေအနေထိ ချဲ့ယူပါ။ ဥပမာ သင် တစ်နေ့ကို တစ်မိုင် ပြေးရင် ၇ မိုင်ပြေးဖို့ဆိုတာ လန့်စရာကောင်းပါတယ်။ အဲဒါကို တစ်နှစ်ပန်းတိုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါ။ ဒီ ပန်းတိုင်ကို ရောက်ဖို့ သင့်ရဲ့ ရုပ်ပိုင်း စိတ်ပိုင်းစွမ်းရည်အားလုံးကို သုံးဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၉. အလုပ်တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပြီး ဆရာတစ်ဆူအဆင့် ဖြစ်တဲ့ထိ လေ့ကျင့်ပါ
ကိုယ့်ဘာသာ တိုးတက်ချင်သူတွေ အတွေ့ရအများဆုံး ပြသနာကတော့ သူတို့ ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာ မသိတာပါပဲ။ သင်ဟာ စိတ်ဝင်စားမှူတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြောင်းနေရင် သင့်ရဲ့ စွမ်းရည်ကို တွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပြီး ဆရာတစ်ဆူဖြစ်တဲ့အထိ စိတ်နှစ်လေ့ကျင့်ပါ။ ဘာလဲဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ သင် လုပ်နေဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ။
တဈသကျလုံး အကြိုးပွနျပေးသှားမယျ့ ခကျခဲတဲ့ အလုပျ ၉ ခု
လူတဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ မနှဈသကျတဲ့ အရာခွငျး မတူကွပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ရဲ့ သကျသကျသာသာ နနေိုငျတဲ့ အခွအေနတှေထေကျ ကြျောလှနျပွီး အလုပျလုပျတာဟာ ခကျခဲပငျပနျးပါတယျဆိုတာတော့ လူတိုငျး သဘောတူကွပါတယျ။
အကောငျးဆုံးနညျးလမျးကတော့ တဈပါတျကိုတဈခေါကျ ခကျခဲတယျလို့ ထငျရတဲ့ အလုပျတဈခုကို ရှာပွီး လုပျတာပါ။ ကွာလာရငျ သငျ့ရဲ့ နစေ့ဉျဘဝထဲကို နသေားကသြှားရငျ ခကျခဲတဲ့အရာတှဟော ပုံမှနျ ကိစ်စတှလေို အသှငျပွောငျးသှားပါလိမျ့မယျ။
လူတှကေို အကြိုးပွုတဲ့ ခကျခဲပငျပနျးတဲ့အရာ တခြို့ကတော့
၁. အရာတိုငျးကို မေးခှနျးထုတျပါ
အဖွရှေိရှိ မရှိရှိ အရာတိုငျးကို မေးခှနျးပွနျထုတျပွီး ကိုယျ့ဘာသာ ဆနျးစဈကွညျ့ပါ။ အဲဒါဟာ ခကျခဲပငျပနျးပမေယျ့ မတူတဲ့ အခွားဘကျက မွငျနိုငျတဲ့ အကြိုးကို ရစပေါတယျ။
သငျ့ဘဝထဲက သငျ့ရဲ့ သူငယျခငျြး၊ ပါတနာ၊ တဈစုံတဈယောကျအပျေါ လုံးဝ ရိုးသားဖို့ဟာ အရမျးခကျခဲပငျပနျးပါတယျ။ သငျ ကောငျးတာပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ဆိုးတာပဲ ဖွဈဖွဈ ပါတနာတဈယောကျကို ဝဖေနျခငျြတဲ့ ခံစားခကျြအားလုံးကို ရိုးရိုးသားသား စာတဈစောငျ ခရြေးပွီး သူ့ကို ပေးလိုကျပါ။ ပွီးရငျ အဲဒီစာက သငျနဲ့ သူ့ကွားဘယျလို အကြိုးသကျရောကျသှားတယျဆိုတာလဲ သတျသတျ စာတဈစောငျ ခရြေးပါ။ အဲဒိအတှအေ့ကွုံကို တဈဘဝလုံး မမပေ့ါနဲ့။
နမေထှကျခငျ ထတာဟာ စာကကျြဖို့နဲ့ အလုပျအတှကျ အကောငျးဆုံး ပါတျဝနျးကငျြကို ပေးနိုငျပါတယျ။ မနကျ ငါးနာရီ တခွားသူအားလုံး အိပျနတေုနျး ထဖို့ဟာ ခကျခဲပငျပနျးလှပါတယျ။
၄. ငှကေို သတိထားသုံးပါ
သငျ့ ကားပွငျစရိတျနဲ့ အာမခံက စလို့ ကျောဖီဖိုး၊ အာလူးကွျောဖိုးအထိ သငျ သုံးလို့ ကုနျကသြမြှအားလုံးကို စာရငျးပွုစုထားပါ။ လပေါငျးမြားစှာ ကွာလာရငျ သငျ ငှကေို ဂရုစိုကျ မှတျသားသုံးတာကွောငျ့ ထှကျလာတဲ့ အပိုငှေ ပမာဏကို အံဩစရာကောငျးလောကျအောငျ တှရေ့မှာပါ။
၅. ဘာစားလဲဆိုတာ စာရငျးမှတျထားပါ
တဈနတေ့ာအတှငျး သငျ စားသမြှ အစားအသောကျတှနေဲ့ လုပျသမြှ လကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို စာရငျးမှတျထားရတာ ခကျခဲမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ အကြိုးအနနေဲ့ သငျ ဘယျအာဟာရကို နညျးနညျးပဲ ရသလဲ?? တဈနကေို့ အဆီ၊ သကွား ဘယျလောကျ စားသုံးနလေဲဆိုတာ သိရှိလာပွီး ခြိနျညှိနိုငျမှာပါ။
၆. အာဟာရဖွဈမယျ့ အစားအစာပဲ စားပါ
အာဟာရရှိမယျ့ဟာပဲ စားခွငျးဟာ သငျ့ရဲ့ဘဝကို လုံးဝ ပွောငျးလဲသှားစနေိုငျပါတယျ။ ပိုးသတျဆေးသုံးမထားတဲ့ အျောဂဲနဈ အစားအစာတှကေို စားပါ။ ဈေးပိုကွီးနိုငျပမေယျ့ ဆေးဖိုးဝါးခထကျတော့ သကျသာပါသေးတယျ။ အဆီမပါတဲ့ အသားတှနေဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ အဓိကစားပွီး ဆနျ၊ ဂြုံ လြှော့စားပါ။ အရမျးခကျခဲပငျပနျးမှာ ဖွဈပမေယျ့ အကြိုး ၁၀၀ ရာနှုနျး ရှိပါတယျ။
၇. လူတှကွေားထဲ စကားပွောတတျအောငျ ကငျြ့ပါ
တှေးရတာတောငျ လနျ့စရာကောငျးနပေမေယျ့ ဘဝတဈကှမှေ့ာတော့ သငျ လူတှရှေမှေ့ာ စကားပွောရဖို့ သခြောပါတယျ။ လကေ့ငျြ့တာဟာ သငျ့ရဲ့ လူမှုဆကျသှယျရေး စှမျးရညျ တိုးတကျဖို့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးပါပဲ။
၈. မဖွဈနိုငျဘူးလို့ ထငျရတဲ့ ပနျးတိုငျတဈခု အောငျမွငျအောငျ လုပျပါ
သငျ လုပျနိုငျသမြှ အခကျခဲအပငျပနျးဆုံး ဖွဈမယျ့ဟာကတော့ သငျ လုပျခဲ့သမြှ ပနျးတိုငျအားလုံးထကျ ပိုပွီး ခကျခဲတဲ့ ပနျးတိုငျတဈခုကို ရောကျဖို့ပါပဲ။ သငျ တဈနတေ့ာ အဆငျပွပွေေ လုပျနိုငျတဲ့ အလုပျတဈခုကို ကွောကျဖို့ကောငျးတဲ့ အခွအေနထေိ ခြဲ့ယူပါ။ ဥပမာ သငျ တဈနကေို့ တဈမိုငျ ပွေးရငျ ၇ မိုငျပွေးဖို့ဆိုတာ လနျ့စရာကောငျးပါတယျ။ အဲဒါကို တဈနှဈပနျးတိုငျအဖွဈ သတျမှတျထားပါ။ ဒီ ပနျးတိုငျကို ရောကျဖို့ သငျ့ရဲ့ ရုပျပိုငျး စိတျပိုငျးစှမျးရညျအားလုံးကို သုံးဖို့ လိုပါလိမျ့မယျ။
၉. အလုပျတဈခုခုကို ရှေးခယျြပွီး ဆရာတဈဆူအဆငျ့ ဖွဈတဲ့ထိ လကေ့ငျြ့ပါ
ကိုယျ့ဘာသာ တိုးတကျခငျြသူတှေ အတှရေ့အမြားဆုံး ပွသနာကတော့ သူတို့ ဘာလုပျခငျြလဲဆိုတာ မသိတာပါပဲ။ သငျဟာ စိတျဝငျစားမှူတှကေို တဈခုပွီးတဈခု ပွောငျးနရေငျ သငျ့ရဲ့ စှမျးရညျကို တှနေို့ငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ တဈခုခုကို ရှေးခယျြပွီး ဆရာတဈဆူဖွဈတဲ့အထိ စိတျနှဈလကေ့ငျြ့ပါ။ ဘာလဲဆိုတာ အရေးမကွီးပါဘူး။ သငျ လုပျနဖေို့ပဲ အရေးကွီးတာပါ။
Previous: ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန်ပြီး သူဌေးဖြစ်ဖို့ နည်းလမ်း (၁၀)ခု
Next: သင့်ကောင်မလေးသင့်ကို ပြန်မကြိုက်တာ အားငယ်စရာမဟုတ်